♪ Angel Shaper: July 2009
Angel Shaper ကို နှိပ်စက်နေတဲ့ H1S1 Virus
ချစ်ငှက်မလေးအား စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြင့် လူသိရှင်ြ...
ရင်နှင့်ရင်းပြီး အပေးခံလိုက်ရတဲ့ ပထမဦးဆုံးသော တက်...
လှည့်စားသူ သို့ ....
သူငယ်ချင်း..... သို့ ... ၁
ချစ်လှစွာသော အပျိုကြီး တီတီနှင်း ( နှင်းနဲ့မာယာ)က ချစ်ခင်၍
တက်ဂ် ထားသဖြင့် ငယ်ငယ်က ရွှတ်နောက်နောက် ရွတ်ခဲ့ဖူးသော
မှတ်မိသမျှလေးများ ပြန်အံရလတ္တံ့ ။
တကယ်ဆိုရင် ကျွန်မရွတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးတွေကိုတော့ သိပ်မမှတ်မိတော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အမှန်ကို ၀န်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ ငယ်ငယ်က
ကြားခဲ့၊ ရွတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးတွေက ကျွန်မစိတ်ကို တကယ်လွှမ်းမိုးခဲ့တာပါ။
ခုလို ပြန်ရေးရတော့လဲ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘ၀လေးတောင် ပြန်သတိရမိပါတယ်။
အိမ်ဘေးနားက ဦးငယ် ကဗျာလေး ရွတ်ပြီး ငယ်ငယ်ကချော့ခဲ့ဖူးတာ အမှတ်ရမိတယ်။
သမီးကို ထမင်းဆီဆမ်းလို့ 
ရွှေလင်ဗန်းနဲ့ ကျွေးပါဦး။ တဲ့....
ဒီလိုလေးလိုက်ရွတ်ပြီး ချော့သိပ်တာခံခဲ့ဖူးတော့ ဖိုးရွှေလမင်းက
လိမ္မာရင်၊ အငိုတိတ်ရင်၊ ရွှေလင်ဗန်းနဲ့ ထမင်းဆီဆမ်းပြီး
လာကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ လိမ္မာအောင်ကြိုးစားဖူးတယ်။
အငိုလဲ တိတ်ဖူးတယ်။ ဖိုးရွှေလမင်းကျွေးတဲ့ ရွှေထမင်းဆီဆမ်း စားချင်တာကိုးးးးးးး
ခုတော့ လိမ္မာရင် ရေခဲမုန့် စားရမယ်ဆိုတဲ့ အသိလေး ရှိထားတော့
လိမ္မာဖို့ ကြိုးစားရပြန်ပေါ့။ အဟီးးးး
အရမ်းကိုကြောက်လန့်စေခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လဲ ရှိပါတယ်။
မုန့်လုံးကို စက္ကူကပ် ပါတဲ့
ဆင်းတယ်လို့ ပြေး ဂျာအေး
ဂျာအေးကို သူ့ အမေရိုက် မှောင်မိုက်မှာငို
ကိုလူပျို ထရံပေါက်က ခြေထောက်ကိုဆွဲ တွဲလဲ
တွဲလဲနေပါဦး မိုးတောင်ကခြုန်း မုန့်လုံး မုန့်လုံး။
ဒီကဗျာလေး ရွတ်ခဲ့မိတုန်းကဆိုရင်တော့ ဂျာအေးက အမှောင်ထဲမှာ ငိုလို့ 
ကိုလူပျိုက ထရံပေါက်ကနေ သူ့ ခြေထောက်ကိုဆွဲပါတယ် ဆိုတဲ့ အသိလေးနဲ့
အမှောင်ထဲရောက်ရင် မငိုရဲပါဘူး။ ခြေထောက်အဆွဲခံရမယ် ဆိုပြီး အသေကြောက်တာပေါ့။
ငိုနေရင်းနဲ့ အမှောင်ထဲရောက်ရင်တောင် ချက်ချင်းတိတ်ပါတယ်ဆို။
ကိုလူပျို ဆိုတာကြီးကိုလဲ မသိဘူးလေ။ မဲမဲကြီး၊ အကောင်ကြီးကြီးနေမယ် ဆိုပြီး အရမ်းကြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလောက်တောင် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်က ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တာပါ။
နောက်တစ်ခုကျတော့ ခုထိသုံးဖြစ်နေတဲ့ ကဗျာမဟုတ်စာမဟုတ်လေးပေါ့။
ရက်သုံးဆယ်မှာ စက်တင်ဘာ၊ ဧပြီ၊ ဇွန် နဲ့ နိုဝင်ဘာ ကျန်လများမှာ သုံးဆယ့်တစ်
ဖေဖော်ဝါရီ နှစ်ဆယ့်ရှစ်၊ ရက်ထပ်နှစ်မှာ တစ်ရက်တိုး ဖေဖော်ဝါရီ နှစ်ဆယ့်ကိုး။
အင်းးးးးး ခုချိန်ထိပါပဲ.... ဇူလိုင်လ ဘယ်နေ့ လကုန်မှာလဲဟေ့ လို့ များ အမေးခံရရင်ဖြင့်
ဒီဟာလေး ရွတ်ပြီးမှ အဖြေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းစာဆိုရင် မှတ်မိနေတတ်တဲ့ သူထဲမှာ ကျွန်မ မပါပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အောင်ဆန်းဇာနည်ဆိုတာလေးတော့ ခုထိမမေ့သေးဘူး။
ဖေဖော်ဝါရီ ဆယ့်သုံးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ
ရှေ့ နေဦးဖာ သား
ဇာတိနတ်မောက် မကွေးခရိုင် သိကြများ ခုတိုင်
ကြံ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ ဇာနည်ဘွား မိခင်ဒေါ်စု သား
မျက်ရည်သွန်လို့ဘ၀င်ညှိုး
ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဗိုလ်ချုပ် ဒို့ ဖခင်
ကောင်းစေချင်တဲ့ အမှာစကား ငါတို့ မမေ့အား
ချမှတ်သွား။ ချ..... မှတ်..... သွားးးးးးးးးးးးးးးးး ကျွန်မ ရွတ်တဲ့ စတိုင်ပါ။
ဒီကဗျာလေးက ခုချိန်ထိ ရင်ထဲကို အမှတ်ရစေတဲ့ ကဗျာလေးပါ။
ရှိသေးတယ်.... အရမ်းသဘောကျတဲ့ ကဗျာလေး....
ဘေးအိမ်က ငယ်သူငယ်ချင်း ဖိုးသာထူးဆိုတဲ့ ပိန်ပိန်သေးသေးလေး တစ်ယောက်ကို အမြဲစနောက်နေကျလေ။
ဖိုးသာထူး.... ဖိုးသာထူး၊ အလွန်ဝတဲ့ ဖိုးသာထူး
ဖိုးသာထူးက ၀မ်းပူပူ၊ ဖိုးဝကြီးနဲ့ တူ
တူပါသကွဲ့ မယုံငြား......ဒီမှာကြည့်ပါလား......... ၀ါးးးးးးးးးးး
ဆိုပြီး ပိန်ပိန်ညောင်ညောင် ဖိုးသာထူးကို ပါးတွေဖောင်းပြ၊ မျက်လုံးပြူးပြပြီး လိုက်စနေကျ ကဗျာလေးပါ။
စာတွေထဲက မမေ့နိုင်တဲ့ အကြိုက်ဆုံးတွေ အများကြီးပါ။
အဲဒါတွေထဲက တစ်ခုကိုလဲ မှတ်မှတ်ရရ ပြောလိုက်ချင်တယ်။
စားစရာ လာယူပါ။ လုမယူရ။ တဲ့။။ အဟီးးးးးးးး ခုထိသိပ်ကြိုက်.....
ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မက စကားလဲ ၀ဲတဲတဲပါ။
ဒါကို သူငယ်ချင်းတွေက ချစ်လို့ ပဲ နေမှာပေါ့ စကြပါတယ်။
ဘယ်ကလာသလဲ၊ ဘယ်နယ်ကလဲ။ အလယ်ကလူ၊ စကားဝဲ၏။ တဲ့....
ကျွန်မနှစ်ခြိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်လဲ လိုက်ရွတ်ဖူးတယ်လေ။
အတန်းထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက် ကိုရင်ဝတ်တော့
ပိုက်ဆံ ငါးပြား ချေးစမ်းပါ၊ ချီးဘူးးးးးးး ချီးဘူးးးးးးးးးး ဆိုပြီး သူငိုအောင် လိုက်စဖူးသေးတယ်။
ရန်ဖြစ်ဖူးတဲ့ ငတိမလေးတစ်ယောက်ကိုတော့ စက္ကူစလေးနဲ့ပေါက်ပြီး
နင့်ခေါင်းပေါ်မှာ အမှိုက်ကြီး၊ နင့်အမေ ဗိုက်ကြီး။ ဆိုပြီး ဘာရယ်မဟုတ် ရန်စွာဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
၁၀တန်း အောင်စာရင်းတွေ ထွက်တဲ့ မနက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂစ်တာတစ်လက် ကိုင်ပြီး
ကော်ဖီဆို ဂျာဗာ၊ ကော်ဖီဆိုဂျာဗာ၊ ကောဖီးဆို ဂျားအားဗာ...
ကော်ဖီဆို ဂျာဗာ၊ ကော်ဖီဆိုဂျာဗာ၊ ကောဖီးဆို ဂျာဗာ... ကော်ဖီဆို ဂျာဗာ...
ဆိုပြီးကျောင်းရှေ့မှာ ပေါက်ကရ အော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲတုန်းကတော့ သိပ်မငယ်တော့ ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကလေးလိုပဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အော်ခဲ့တာလေ။
ကဲ... တီနှင်းရေ.... ဒီလောက်ပဲ မှတ်မိတော့တယ်။
နောက်လ မကူးခင် အမြန်ဆပ်တာနော် အဟီးးးးးး
အကြွေးဆပ်လိုက်ပြီဖြစ်၍ .... ရေခဲမုန့်လာစားတော့မည်.... ဒါပဲ......
31.7.09 ( Fri; )
Angel Shaper H1S1 ရောဂါကို အပြင်းအထန်ခံစား နေရပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ခုတလော အရမ်းကို သောင်းကျန်းပြီး
အထူးသဖြင့် မိသားစု၊ မောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့
အကြာကြီး ခွဲပြီး နေနေရတဲ့ ဒီနေရာမှာ ရောဂါပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
ဒါတောင် ဒီမှာ အတူနေရတဲ့ သူတွေက မောင်နှမအရင်းလို ချစ်ခင်စည်းလုံးကြတာနော်။
ဒီက အကို၊ အမတွေ၊ မမြင်ဖူးသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေ၊
အားလုံး အားလုံးက နွေးနွေးထွေးထွေး ခင်ခင်မင်မင်နဲ့
ခံစားချက်တွေကို စာနာနားလည်ပြီး ကူညီရိုင်းပင်းခဲ့ကြပါလျက်နဲ့
ဒီရောဂါကို ဘာကြောင့်များခံစားနေရလဲ ဆိုတာ အဖြေရှာမရပါဘူး။
ဒီလူတွေနဲ့ မပျော်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ပျော်လိုက်တာ၊ ကဲလိုက်တာမှ တခါတလေ အိပ်တောင် မအိပ်ရပါဘူးဆို။
ဒီ H1S1 ရောဂါဟာ သိပ်ဆိုးပါတယ်။
ခံစားဖူးတဲ့ သူတွေ၊ ခံစားနေရတဲ့သူတွေပဲ စာနာနားလည် ပေးနိုင်မှာပါ။
ဒီဗိုင်းရပ်စ် ဟာ လူကို တကယ် ဒုက္ခပေးပါတယ်။
လုပ်ချင်၊ ကိုင်ချင်စိတ်တွေ လျော့နည်းလာစေမယ်၊
(Angel Shaper ကတော့ အဲဒီရောဂါကြောင့်လားမသိဘူး
ပိုပြီး အစားဝင်လာလို့ ဝိတ်နည်းနည်းတက်လာတယ်.. အဟိ)
စိတ်ရော၊ လူရော လုံးဝ နွမ်းပြီး၊ အခန့်မသင့်ရင် စိတ်ကျရောဂါပါ
ဝင်သွားစေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး
ဘဝ တိုးတက်မှု အတွက် ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်တစ်ပါးပါ။
အခန့်မသင့်ရင် စိတ်အနေအထားပါ ချို့ ယွင်းသွားတတ် ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် Angel Shaper ဒီရောဂါကို ဒီအတိုင်း ဘလိုင်းကြီး ငြိမ်ခံနေလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး
အစွမ်းကုန် တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက် ကိုယ်တိုင်ကုသနေပါတယ်။
Angel Shaper ကို နှိပ်စက်နေတဲ့ H1S1 ရောဂါဆိုတာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။
အားလုံးသိထားပြီးသား ရောဂါပိုးလေး တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ HOME SICKNESS ပါပဲ။
ခုချိန်မှာ ဒီရောဂါကို အစားများများ စားပေးခြင်း၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ခြင်းနှင့် အစားထိုးကုသခြင်း၊
သီချင်းများများနားထောင်ခြင်း၊ ဂစ်တာတီး ၍ စိတ်ကြိုက်သီချင်းများ အော်ဟစ်ခြင်း၊
မောင်နှမများ၏ အိမ်များသို့လည်ပတ်၍ စိတ်အစာကျွေးခြင်း၊
မတတ်တခေါက် စာလေးများရေးခြစ်ခြင်း တို့ နဲ့ကုသမှု ခံယူနေပါတယ်။
တကယ်လို့ များ အားလုံးရဲ့ အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ဒီရောဂါ ခံစားနေရတဲ့သူ များရှိခဲ့ရင် လက်တို့ ပြီး သတင်းပေးပါ။
Angel Shaper ရဲ့ ဆေးမြီးတိုလေးလဲ လက်ဆင့်ကမ်းပေးပေါ့။
ကဲ... ဘယ်သူတွေ ဒီဗိုင်းရပ်စ်နှိပ်စက်ခြင်း ခံနေရလဲ?
ဆေးမြီးတိုလေး လက်ဆင့်ကမ်းရင်း အားလုံးပဲ ပြုံးပျော်ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်း
28.7.09 ( Tue; )
" ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပြု " ဆိုတဲ့ ငါ့နှလုံးသားကိုမှ
ငါ့ခွင့်ပြုချက်အပြည့်အဝမရခင် အတင်း ဝင်ချလာတယ်။
နင့်ရဲ့ အတ္တတွေ၊ မာနတွေအတွက် ငါ့ကိုထားခဲ့ပြန်တယ်။
နင် ဝင်ချင်တိုင်းဝင်၊ ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့ ရအောင်
ငါ့နှလုံးသားကို ကျောင်းဝင်းထဲက ကင်တဲန်းများမှတ်နေလား?
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကပြောတယ် " အချစ်နှစ်ခု ပေါင်းစပ်တဲ့အခါ၊
မိဘအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ စွက်ဖက်မှုတွေမပါရင် သိပ်ကောင်းမှာနော် " တဲ့။
ငါတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သွားတာ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းတွေ မဟုတ်သလို၊
ငါတို့ နှစ်ယောက် စိတ်တူကိုယ်တူ ချစ်ခဲ့ကြပါလျက်နဲ့
ငါတို့ ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ မာနတရားတွေက ဝင်ရောက် စွက်ဖက်သွားကြတာပါ။
နင်အဲဒါကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တာ ငါတကယ် ရင်နာတယ်။
ငါ့ရဲ့ နှလုံးအိမ်မှာ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် Sign Up လုပ်သွားပြီးမှ Password ကိုဖျောက်ထားခဲ့တယ်။
ငါ့ကိုလဲ ညာလိုက်သေးတယ်နော်။ " ငါ Password မေ့သွားပြီ။ ဝင်လို့ မရတော့ဘူး " တဲ့။
ဟဟဟားးးးးးးးးးးးးးးးး လို့ သာအော်ရယ်လိုက်ချင်ပါတယ်ဟာ။
ငါ့နှလုံးသားကလဲ Password မပါရင် ဝင်လို့မရတာ နင်အသိပါလေ။
ခုဆို ဘယ်သူပဲ ကြိုးစားကြည့်နေပါစေ...........
Wrong User Name Or Password!!!!! ဆိုတာပဲ ပေါ်နေလေရဲ့။
ငါလဲ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူးဟာ။
ခုတော့ User မရှိတော့တဲ့ ငါ့နှလုံးအိမ်မှာ လာရောက်ပြင်ဆင်ပြီး၊
ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြုပြင်မဲ့သူမရှိရှာတော့ စုတ်ပြတ်သတ်နေပြီပေါ့။
25.7.09 ( Sat; )
ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကိုယ်လည်းလေ လောကီသားပေမို့ဖြစ်ချင်တဲ့၊
လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေက ခပ်များများရယ်။
များလွန်းလို့ မေ့လျော့နေတဲ့ ဆန္ဒလေးတွေလဲ ရှိနေပါပြီ.... ဒါတွေထားပါလေ........
ကဲ...ကဲ.... စရေးပါတော့မယ်။။ ငယ်ငယ်ကတည်းက မှတ်မိတဲ့ ဆန္ဒလေးတွေက စပါမယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့ ကလေးထုံးစံပေါ့၊ ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။
ဘွဲ့ ဦးထုတ် အများကြီးဆောင်းရတဲ့ ပညာတတ်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်လေ။
သိတတ်စအရွယ်မှာတော့ Angel Shaper ဤသို့ အရူးထခဲ့သည် ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးမှာရေးခဲ့သလိုပဲ
သီချင်းဆိုရတာကို ပျော်တယ်။ ကြီးလာရင်တော့ အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒလေး(ခုထိ) ရှိတယ်။
အိမ်မှာတော့ တို့ ရဲ့ ဟီးရိုးကြီးတွေက အဘိုးနဲ့ အဖေပေါ့။
သူတို့ လို လူတွေကို စေတနာထား၊ ကူညီရိုင်းပင်းပြီး၊ သူများအကျိူးသယ်ပိုးပေးတတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ၊
သားသမီးတွေအပေါ်မှာ ပုံသက်သေကောင်းပြခဲ့တဲ့ အရည်အသွေးလေးတွေအတွက် လေးစားရ၊ အရမ်းချစ်ရလို့ 
ငါကြီးလာရင်တော့ သူတို့ လို ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ ဆန္ဒလေးလဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲလိုပဲ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် အသက်လေးလဲ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာသလို၊
လူအမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ ကြုံခင်မင်လာရတယ်။
ရောက်ရှိကျင်လည်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လဲ အသစ်အဆန်းများ လာတာနဲ့အမျှ
ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေကလဲ အော်တို ပြောင်းလဲလာတယ်လေ။
တို့ ခုနှစ်တန်းနှစ်မှာတော့ တို့ ကို အရမ်းချစ်ပြီး ခင်ဖို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဘေးအိမ်က အန်တီကြီး အဖမ်းခံရတယ်။
သူ့ ကိုမတရားတဲ့ အမှုစစ်နည်းနဲ့ အပြစ်ဒဏ် ၁၂နှစ်အချခံရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲလို မတရားတဲ့အမှုတွေကို
တရားတဲ့ နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ တရားသူကြီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။
ရှစ်တန်းနှစ်မှာတော့ အတန်းပိုင်ဆရာမက တစ်ယောက်ချင်းစီ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေ ထပြောခိုင်းတယ်။
တို့ လဲ ၀ံ့ဝံ့ကြွားကြွားနဲ့ပဲ " သမီး တရားသူကြီး ဖြစ်ချင်တယ် " လို့ ဖြေခဲ့တယ်။
အဲဒီအတန်းချိန်လဲ ပြီးရော အတန်းထဲက ကောင်လေးတွေက လိုက်စတယ်။
" ဟေ့ကောင်၊ နင်တရားသူကြီးဖြစ်ရင် ငါတို့ ကိုတော့ လျော့လျော့ပေါ့ပေါ့လေး အပြစ်ဒဏ်ချပေါ့ဟာ " တဲ့။
တို့ လည်း ပြန်မေးလိုက်တာပေါ့။ " နေစမ်းပါဦး၊ နင်တို့ က ဘာအမှုနဲ့ ရောက်လာကြမှာလဲ " ဆိုတော့၊
" တရားသူကြီးကို ဖက်နမ်းတဲ့ အမှုနဲ့ ပေါ့ဟဲ့ " တဲ့။
ချက်ချင်း အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးခဲ့တယ်။ " ဟေ့ကောင်တွေ၊ သေဒဏ်ပဲ၊ ဟွင်းးးးး "
နောက် ၁၀တန်းနှစ်မှာတော့ ကျန်းမာရေးအရမ်းချူချာလို့အရမ်းကို ကျန်းမာချင်တာပဲ။
အဲလိုနဲ့ ပဲ လူတွေကျန်းမာအောင်ကူညီပေးတဲ့ ဆရာဝန်အရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့ပြန်တယ်လေ။
ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အိပ်မက်လေးတွေကို
အကောင်အထည် အတူတူဖော်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ချင်သေးတယ်လေ။
နောက်တော့လည်း တစ်နယ်စီ ခွဲခွာခဲ့ရပြန်တော့ မလုပ်ဖြစ်ပြန်ဘူး။
ရည်းစားလေး ထားမိခဲ့ပြန်တော့လည်း သူ့ ကိုပဲချစ်ချင်ခဲ့တယ်။
ကိုယ်လဲ သူ့ ကိုပဲ ချစ်ချင်ခဲ့သလို၊ သူလဲ ကိုယ့်တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ချစ်နေစေချင်တယ်။
ကိုယ့်အတ္တလေးပဲပေါ့ကွာ... မုန့် ကိုသာ ဝေစားတတ်တာ၊ အချစ်ကျ ဝေမစားနိုင်ပြန်ဘူးလေ။ဟိဟိ
အဲဂလို......အတ္တဆန်ဆန် ဆန္ဒလေးလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ ။
ဒါပေမဲ့ပေါ့.... သူလဲလေ လောကီသားပေမို့ ................
ပညာတတ်ဖြစ်ချင်တဲ့ Angel Shaper တစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့နိုင်ငံခြားကျောင်းတက်ဖို့ 
သင်တန်းတွေလိုက်တက်၊ IELTS တွေလိုက်ဖြေနဲ့လုံးပမ်းလာတာ
အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ပဲ ကြုံခဲ့ရတယ်။
ခုတော့လဲ ကုလားမျိုးစုံ ( ကုလားမျိုးစုံဆိုတာ ကုလားဖြူ၊ ကုလားမဲ၊ ကုလားနီ၊ ကုလားဝါ၊ ကုလားပြာ၊ ကုလား......) ပေါတဲ့
နိုင်ငံမှာအလုပ်ရလို့ ဘာရယ်မဟုတ် လာလုပ်နေတယ်။
ပျော်တယ်လဲ မဟုတ်၊ မပျော်ဘူးလဲ မဟုတ် နဲ့နေလာတာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။
နိုဝင်ဘာလကို အန်တီ့ဆီလည်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့ဆုံဖို့ အရမ်း ကို အားခဲထားတာ။
အန်တီကလည်း အဓိက ကိုယ့်ကို လွမ်းလို့ တွေ့ ချင်တာရယ်၊
အဲဒါ နိုဝင်ဘာလ ခွင့်တင်တော့ မရခဲ့ဘူး၊ ဒီနိုင်ငံက ဥပုဒ် ရှိသတဲ့လေ။
ခုတော့လဲ လုပ်ချင်ရာ လျှောက်လုပ်ပြီး၊ ရေးချင်ရာ လျှောက်ရေးတဲ့
Angel Shaper တစ်ယောက် ဘလော့ဂါ မောင်နှမအိမ်တွေပဲ လည်ပတ်ပြီး
စာဖတ်သူလိုက်လုပ်ဖို့ ဆန္ဒလေး ပြင်းပြင်းပြပြ ဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပေါ့။
ကိုသီဟသစ်နဲ့ ရေတမာပြောတဲ့ ဘလော့ဆိုတာ....
Angel Shaper အတွက်ကတော့
ရင်ဘတ်ထဲက အရာအားလုံးကို သွန်ချလို့ ကောင်းတဲ့ နေရာလေးတစ်ခု
မောင်နှမအိမ်တွေသွားလည်တာကျတော့ စိတ်အစာကျွေးပြီး၊ အပမ်းဖြေ တာပေါ့။
ရင်ဘတ်ထဲမှာ ပြည့်လာရင်တော့ ကြိုးစားပြီး အန်ထုတ်ပ့ါမယ်....
အဲဒီအခါတော့ မမေ့မလျော့ လာခဲ့ကြဦးပေါ့။
နောက်......လုပ်ချင်နေတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုလေးအတွက် ပိုက်ဆံစုဖို့ကြိုးစားရဦးမယ်။
P;;;; ကိုသားကြီး နဲ့ငှက်ကလေးသိတယ် ဝေ့....
တလွဲ ထင်ကြမှာစိုးလို့ ... ကြိုဖြေရှင်းရတယ်။ ဒီနှစ်ယောက်က လွယ်ကိုမလွယ်တာ....
မဟုတ်ကဟုတ်က တွေးပေးနေမှာစိုးလို့ လေ....ဟိဟိ
ဒီလိုပါပဲ..... ကိုယ်လည်းလေ လောကီသားပေမို့ ၊ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ အများကြီးနဲ့ 
မဖြစ်ခဲ့၊ မပြည့်စုံခဲ့တဲ့ ဆန္ဒတွေအားလုံးအတွက် မချိတင်ကဲ ဖြစ်ရုံကလွဲလို့ ......
မပီပြင်ခဲ့တဲ့ တို့ ရဲ့ ဆန္ဒလေးတွေပါ။ ချစ်တဲ့ ငှက်ကလေး နဲ့အားလုံးသော မောင်နှမများ ကျေနပ်နိုင်ပါစေနော်။
22.7.09 ( Wed; )
ချစ်ငှက်မလေးအား စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြင့် လူသိရှင်ကြား တောင်းပန်ခြင်း
ကိုသားကြီးရဲ့ တက်ဂ်လေး ရေးကြည့်လိုက်မှ သိလိုက်ရတယ်။
ကိုယ်ဘယ်လောက် ပေါ့ဆလိုက် ပါသလဲဆိုတာကိုပါ။ စိတ်လဲလုံးဝမကောင်းပါဘူး။
ကိုယ့်ကို ဝင်မန့်ထားတာလေးတွေ ကို ပြန်လှန်ကြည့်လိုက်တော့လေ......
ငါ့ညီမလေးငှက်က အဖေ့အတွက် ကဗျာမှာ မန့် ခဲ့တုန်းက တက်ဂ်သွားကြောင်း ပြောခဲ့သေးတာပဲနော်။ တကယ်ပါပဲ။။။ ငှက်ရေ...မင်းအမဟာလေ မင်းလိုမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။
ညံ့ပါ့၊ တုံးပါ့။ ရှက်ရှက်နဲ့ ဝန်ခံပါရစေကွယ်နော်။
ညီမလေး အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒဆိုတာလေးရေးတဲ့ ပိုစ့်ကို ဖတ်ခဲ့သေးတယ်။
ကိုယ့်နာမည်တွေ့ တော့ အော် သူခင်တဲ့သူတွေ နာမည်ချရေးတာပဲလို့ ထင်ခဲ့မိတာပါ။
တက်ဂ်ဆိုတာ ကိုမသိခဲ့တာပါကွယ်။ (မျက်နှာဘယ်ထားရမှန်းမသိတော့ဘူး..ဟီးးးးးးးး ရှက်လိုက်တာ) အဲဒီတုန်းက " မမရေ အားလည်းနာတယ်နော် မမကို တက်ဂ်ထားတယ် " ဆိုတာကို နားမလည်လို့ ယောင်ချာချာနဲ့ဘာပြောသွားမှန်းတောင်မသိလိုက်တာဟေ။
ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရမည် ဆိုလျှင်ဖြင့် သူငယ်ချင်းတို့ ၏ ဘလော့များ ဝင်ဝင်ဖတ်မှ တက်ဂ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါ၏။
အဘိဓာန်ဆိုသည်ကိုလည်း ပျင်းရိသော အကျင့်ကြောင့် မသိသော စကားလုံးရှိလည်း မလှန်မိပါ။
ဤသူမှာ အခြားသူမဟုတ်ပါ ညံ့ဖျင်း ၍ ပျင်းရိလွန်းသော အကျွန်ုပ် ပင်ဖြစ်ပါ၏။
ငါ့ညီမလေး ထင်ရှာရော့မယ်.... သူ့ ကိုဂရုမစိုက်ဘူးလို့ လေ။
ပထမဦးဆုံးရဖူးသောတက်ဂ်ကလေးရဲ့ ရှေ့မှာ ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ တက်ဂ်ဦးလေးလို့ လေ။
အကျွန်ုပ် Angel Shaper သည် အဖြစ်ချင်ဆုံးသောဆန္ဒဟူသည့်
ချစ်ငှက်မလေး၏ တက်ဂ်ပိုစ့်အား ကြိုးစား၍ မကြာမီရေးပေးပါမည်ဟု
ဤတောင်းပန်စာဖြင့် အများသိစေရန် ၀န်ခံဂတိပြု လက်မှတ်ထိုးပါ၏။
မကြာမီ၊ လာမည်၊ မျှော်......
19.7.09 ( Sun; )
ဟူးးးးးးးးး ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲတဲ့။ (ခုထိမလျော့သေး....ဟိဟိ)
(အဟဲ... ငါ့တောင်းပန်စာလေး အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ ပိုစ့်လေးတောင်
ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားပါရော့လား ...ဟရို့ )
ရင်နှင့်ရင်းပြီး အပေးခံလိုက်ရတဲ့ ပထမဦးဆုံးသော တက်ဂ်ပိုစ့်လေး
ဒီတက်ဂ်လေးဟာ ကိုသားကြီးဆီကနေ မမျှော်လင့်ပဲ ရရှိလိုက်ရတဲ့ ပထမဦးဆုံးသော တက်ဂ်လေး ဖြစ်သလို၊ နောက်အကျဆုံးသော (အသုံးမကျဆုံးသော)သူ ဖြစ်သွားမိလို့ဦးဆုံး ကိုသားကြီးကို တောင်းပန်ရင်း ကျေးဇူးတင်စကားလဲ ပြောလိုက်ပါရစေနော်။
Angel Shaper ဆိုတာ ပေးဆပ်သူက သမီးရဲ့ Good Shaper တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုလွင်မင်းခန့် ပေးလိုက်တဲ့ နာမည်လေးပါ။ သူက လောကကြီးမှာ Shape ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ Shapee တွေကို ကောင်းမွန်စွာနဲ့Shape ပေးနိုင်မဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေလိုသော ဆန္ဒလေးနဲ့ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နာမည်လေးကို လျှာရှည်စွာဖြင့် မိတ်ဆက်လိုက်ရပါ၏။ (ဘယ်သူမှမမေးလို့ ၊ ဝင်ရှည်ရတယ်လေ...အဟိ...)
ဒီဘလော့စမလုပ်ခင် ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တာက Angel Shaper ရဲ့ဇာတိ ကလေး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းက တစ်မြို့တည်းသားဖြစ်တဲ့ ကိုနောင် (naung83)ကပဲ ucoz ကနေ www.angeldim.do.am ဆိုတဲ့ site လေး စပြီး လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ကဲ တစ်ခုခုရေးဟေ့ ဆိုပြီး စာစရေးခိုင်းတော့၊ ဘာစာရေးရမှာတုန်းပေါ့။ သူက မင်းအကြောင်း စရေးချလိုက်ပါကွာတဲ့။ ဆိုတော့ ကိုယ့်အကြောင်းလေးကို ချရေးလိုက်မိတယ်။
သူက " ကောင်းတယ်၊ နောက်ထပ် ဆက်ရေး၊ဆက်လုပ်နော် " ဆိုပြီး ကွန်မန့်နေရာမှာ စာရေးထားခဲ့တယ်လေ။ အဲလိုနဲ့ သူက ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည် ၀င်မန့် ခဲ့တဲ့သူပဲပေါ့။ အဲဒီ စာလေးတွေ့တော့ ပျော်လိုက်တာ ပါဆို၊ ရှိသမျှသူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ကြွားပြီး ၀င်ခိုင်းရတယ်။ တစ်ချို့ က မရဘူးတဲ့။ အာ... ဘာလို့ မရတာလဲ ဆိုပြီးတော့ ပြသနာရှာတယ်... စိတ်ကောက်တာပေါ့။ သူငယ်ချင်း အောင်ကို ၀င်လည်သွားပြီး လာလည်တယ် ဆိုတာလေးကို ပျော်လို့မဆုံး။ ဒါပေမယ့် နောက်နေ့တွေ ဘာမှကို မလုပ်ဖြစ်တော့သလို ကိုနောင်က "ဘာတွေ တင်ဖြစ်ပြီလဲ" မေးရင် ကိုယ်ကဘာမှမလုပ်တတ်ရှာတော့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ သူလုံးဝ သဘောမကျ ပါဘူး။ သူ့မှာ တော်တော်လေး ညစ်သွားပုံရတယ်။ ညစ်မှာပေါ့........ လို့ Angel Shaper.... ငယ်ငယ်ကတည်းက "ကျွန်တော်၏အကြောင်း" လို စာစီစာကုံးတောင် ဖြစ်အောင်ရေးတတ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ သီချင်းသာ ဆုန်သင်းပါရ်တို့တင်ဇာမော်တို့ ရှုံးအောင်ဆိုတတ်တာ။ (ဟဲ.. ဟဲ....ကြော်ငြာဝင်ခြင်းဖြစ်၏။)
ကိုနောင်လည်း နောက်ပိုင်း အွန်လိုင်းတက်မလာနိုင်တော့ ၁လကျော်၊ ၂လလောက် သူနဲ့ အဆက်အသွယ် လုံးဝ ပြတ်သွားတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်လေး နှစ်ပုဒ်လေး စမ်းရေးမိတယ်။ ပေးဆပ်သူက ကိုလွင်မင်းခန့်၊ ကိုနိုင်ကြီး၊ သူငယ်ချင်း အောင်ကို၊ သူငယ်ချင်း Richard (မှော်ဘီ)၊ မောင်လေး အားလီတို့တွေ သနားပြီး၊ နှစ်သိမ့်တဲ့ အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါ ၀င်ပြီး မန့်ပေးကြရှာပါတယ်။ မမန့်ရင်လဲ ပြသနာအရှာခံရလို့ ပါမှာပေါ့။ သူတို့ မန့်ခဲ့တာလေးတွေကို ကိုယ့်မှာ ဖတ်လို့မဝ၊ ရှုလို့ မဝ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေ။ ကိုယ်ကသာ ဘာမှမရေးတတ်တာ။
နောက်တော့ "မင်းဆိုဒ်လေးက လှပါရဲ့ မျက်စိကြိမ်းလိုက်တာဟယ်၊ မှောင်မည်းနေတာပဲ၊ တခုခုတော့လုပ်ပါဦး" ဆိုတဲ့ ကွန်မန့်တွေများလာတာနဲ့ပဲ တာချီလိတ်က သူငယ်ချင်းဟိန်းနီကို ဝင်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ငါ့ဆိုဒ်လေးကို ဝင်မွှေပေးသွားပါပေါ့။ သူက သိပ်နားမလည်ပါဘူးဟာ။ Blogspot ပဲလုပ် အဲဒါလွယ်တယ်။ ငါလုပ်ပေးမယ် ဆိုပဲ။ အဲလိုနဲ့သူက ကိုယ့်ကို ကူညီသင်ပေးရင်း နှစ်ယောက်သား ဘလော့စပေါ့လေးစတင်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်။
အဲလိုနဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဘလော့လေးကို စလုပ်ရင်း ဘလော့ Title လေး ဘာပေးမလဲဆိုတော့ အွန်လိုင်းမှာ ဖွန်ကြောင်နေတဲ့ အကိုတစ်ယောက်ကို လှမ်းမေးရတယ်။ "အကို ဘလော့ လုပ်မလို့ ဘာနာမည် ပေးရမလဲ" မေးတော့ သူ့ဟာသူဆေးလိပ်သောက်ချင်တာကို ဆေးလိပ်သွားသောက်ချင်တယ်မပြောပဲ၊ ပညာရှိ စတိုင်နဲ့ "ခနလေးစောင့် ငါသွားစဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်" တဲ့။ သူဆေးလိပ်သောက်တာ...အဲ... သွားစဉ်းစားတာကို စောင့်လိုက်ရသေးတယ်။ ခနနေတော့ ဖြူစင်ကြယ် လို့ ပေးလိုက်ပါတဲ့။ ဖြူစင်တဲ့ ကြယ်ကလေးတွေလို လူတွေကို အလင်းပေး၊ လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးနဲ့တဲ့။ "အင်း...ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းတယ်၊ အဲဒါပဲပေးမယ်" ဆိုပြီး ဟိန်းနီကို ပြောပြလိုက်တော့။ သူကလဲ လျှာရှည်တယ် တကယ်... " ဟေးးး ကြယ်ဖြူစင် မဟုတ်ဘူးလား၊ နင့်ဟာက မှားနေတယ်" တဲ့။ "အာ..ရှည်လိုက်တာဟယ်၊ ငါ့အကို အဲလိုပဲပေးသွားတာ၊ ဖြူစင်ကြယ်ပဲ ပေးမယ်" ဆိုတော့မှ သူလဲမတတ်နိုင်လို့"အိုကေ" ဆိုပြီး လိုက်လျောလိုက်ရ တော့တာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ဖြူစင်ကြယ်ဆိုတဲ့ ဘလော့လေးဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီညမှာပဲ Do We Have Good Manners? ဆိုတာလေးရေးပြီး တင်ကြည့်တယ်။ ဘယ်သူမှလာမဖတ်ဘူးလေ။ မြန်မာလိုလည်း သိပ်မရိုက်တတ်တော့ နောက်ပိုင်းဒီလိုပဲ ပစ်ထားမိတယ်။
အားတဲ့အချိန်တိုင်းတော့ ကိုနိုင်ကြီးတို့ရဲ့ ပေးဆပ်သူ ဆိုတဲ့ ဘလော့လေးမှာတော့ သွားပြီး ဝင်ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ တင်တဲ့ စာလေးတွေက ဗဟုသုတအပြင် သင်ခန်းစာလေးတွေ မှတ်စရာ၊ လိုက်နာစရာလေးတွေပါတော့ အဲဒီပဲရောက်ဖြစ်တယ်လေ။ ဘယ်သူ့ ဘလော့မှလဲ မသိသေးတော့ အဲဒီပေးဆပ်သူပဲ ကိုယ့်မှာအဖော်ရှိတာကိုး။ ချတ်တင် ကလဲ ကိုယ်ကသိပ်စိတ်မရှည်တာနဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှ ရေရေလည်လည် မချတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
တစ်နေ့ တော့ ပေးဆပ်သူမှာ တင်သမျှ အဟောင်းအသစ်တွေ အကုန်ဖတ်ပြီးလို့လုပ်စရာမသိဖြစ်နေချိန်မှာ ဒီနေရာတွေလည်း သွားလည်ပါဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးအောက်မှာ သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာဆိုတာလေးကို သွားတွေ့ လို့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့ (အကိုလား၊ မောင်လား မသိတဲ့) ရေတမာ ရေးထားတာလေးတွေ အများကြီးပဲ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ။ မသိတဲ့လူတွေ ဝင်မန့် လို့ မရဘူးထင်လို့ ၊ ဘာမှမမန့် ပဲ စာတွေ အကုန်ဖတ်သွားလိုက်တယ်။ အဲဒီကတဆင့် ကိုသားကြီး၊ မနိုင်းနိုင်းစနေ စတဲ့............ တွေ့သမျှ ဘလော့တွေ ဝင်မွှေကြည့်တယ်။ ဖတ်လို့ သိပ်ကောင်းလိုက်တဲ့ စာတွေပါဆို။
ကိုသားကြီးဆီရောက်သွားတော့ ကျားကလေးရဲ့ ပုံပြင်လေးနဲ့ တန်းတိုးတာပဲ။ ဝင်ဖတ်ပြီးတော့မှပဲ "It is My ရင်ဘတ်၊ and you can leave your ခြေရာ၊ But, not ဖနှောင့်၊ P; thank you" ဆိုတာလေးကို တွေ့တော့ သဘောကျလို့ဝင်မန့် ကြည့်လိုက်တာ၊ ရသွားလို့ ပျော်လည်းပျော်၊ ကြောက်လဲကြောက်သွားသေးတယ်။ ချက်ချင်းပြန်လှည့်ပြေးလာတယ် တန်းနေတာပဲ.... ခစ်ခစ် (တစ်ခါမှ မမန့် ဘူးလို့ လေ)။ သူလိုက်လာပြီး လာလည်သွားကြောင်း၊ တန်းပလိတ်ချိန်းဖို့ မသွားကြောင်း၊ လာလည်သွားတာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရေးသွားတာ တွေ့တာ ပျော်ကြောက်ကြီး ဖြစ်ပြီး အဲဒီည အိပ်လို့တောင် မပျော်ဘူး။
အဲလိုနဲ့ငှက်ကလေးရဲ့စာမျက်နှာ၊ ကောင်းကင်ပြာ၊ သူ့ဆီက တွေ့တဲ့ လက်လှမ်းမှီတဲ့ ဟာတွေ အကုန် ဝင်မွှေ လိုက်တာ။ မန့် မိတာတွေ မန့် ခဲ့နဲ့ တော်တော် ညဉ့်နက်လို့ ကျေနပ်သွားမှ အိပ်ယာဝင်လိုက်မိတယ်။ မနက်နိုးလို့ဖြူစင်ကြယ်လေး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုသားကြီး၊ မကောင်းကင်ပြာ၊ ငှက်ကလေး၊ Dream ၊ မနန်းတို့ ဝင်လည် ဝင်မန့် သွားကြတယ်။ အားလားးးး လားးးးး ပျော်လိုက်တဲ့အပျော်ဆိုတာလေ၊ ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ စကားထက်ပိုရင် ပိုများနေမလားမသိပါဘူး။ ရင်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ မမျှော်လင့်ရဲခဲ့သလို၊ ထင်လည်းမထားပဲ ရောက်လာကြတယ်လေ။ ကိုယ်ကရဖူးတဲ့ forward လေးတွေ၊ ရေးမိရေးရာတွေလျှောက်ရေးပြီး တင်ထားတယ်။ သူများတွေလိုလဲ ရေးတတ်တာ၊ တော်တာလည်းမဟုတ်လို့လေ။
အင်း.......... အားလုံးကို အားတော့ နာမိသား။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ (ကြော်ငြာနောက်တစ်ခုဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်) ငယ်ငယ်တုန်းက သိုင်းဝတ္ထု သိပ်ကြိုက်တာ။ ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင် အိမ်ပေါ်ကနေပဲ ခုန်ချလိုက်ရင် အောက်မရောက်ပဲ ပျံသွားတော့မှာလိုလို၊ လူကတက်ကြွတာ၊ လေထဲမှာသိုင်းကျင့်ရင်များ ပျော်စရာသိပ်ကောင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့ ပေါကြောင်ကြောင် အတွေးတွေ တွေးမိဘူးလောက်အောင်ကို ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်လေ။ တစ်နေ့သိုင်းဝတ္ထုတစ်အုပ် ဖတ်ရင်းနဲ့(စာရေးဆရာ မမှတ်မိတော့လို့ မပြောတော့ပါဘူး) သိုင်းသမားနဲ့ရန်သူတွေ လမ်းမှာတွေ့ပြီး ဖိုက်ကြတဲ့ အခန်းပေါ့။ ကိုယ်က စာဖတ်တာ ဈာန်ဝင်နေပါတယ်ဆိုမှ စာရေးဆရာ လုပ်ချလိုက်ပုံကို ကြည့်ဦး "မည်သို့ လုပ်လိုက်သည်မသိ၊ လူငါးဦးလဲကျသွားသည်" တဲ့။ တိန်...အာ ဘာကြီးလဲပေါ့။ ရေးနေတဲ့ သူတောင် မသိလိုက်ရင် ငါကဘယ်လိုလုပ် သိမလဲ??? ဆိုတာလေးတွေးမိပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်မိလို့ နောက်ပိုင်း သိုင်းဝတ္ထု မဖတ်ချင်တော့ဘူး။ ခုထိပါပဲ သိုင်းဝတ္ထု သိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့တာ။ ခုကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒီလိုပဲ ဘာမှမရေးတတ်ပဲ၊ မသိနားမလည်ပဲ ရေးချင်ရာလျှောက်ရေးနေတဲ့ သူကိုမှ (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့)လာပြီးအားပေးကြ၊ ခင်မင်မှုလေးတွေ ပြသပေးနေကြတော့ အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာကြည်နူးရကြောင်းလေးပါ။ အားလုံးရဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှု၊ လက်ခံမှု လေးတွေ၊ အားပေးမှုလေးတွေက Angel Shaper လို ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်အတွက် အားဆေးလေး တစ်ခွက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်း တွေမှာလည်း ချင်းမလေး၊ မကိကိ၊ မမြူး၊ ဂျပန်ကောင်လေး၊ ကိုရီနို၊ မေဇင်၊ မီးမီးချစ်၊ မမမေ၊ ယောကျာင်္းလေး အမှတ်နဲ့ ညီရေလို့အားပေးခဲ့တဲ့ ကိုကြယ်သောကြာ၊ အနမ်း၊ မမိုးခါး၊ ချစ်ပါးလုံး၊ တလနွန်၊ ရေတမာ၊ ကြယ်ကလေး၊ မမဟာဆန်၊ ကိုနွေဆူး၊ ဇော် တို့ နဲ့ အားလုံးသော သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ ရဲ့ ဖြူစင်ပြီး ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့်မှု၊ ခင်မင်မှုလေးတွေ လာပြီး ပေးသွားကြတယ်လေ။ အဲဒါလေးတွေအားလုံးက Angel Shaper ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လာလို့စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်လို မြန်မာလိုပဲ ပြောလိုက်ချင် ပါတယ်။ Angel Shaper အားလုံးကို အရမ်း ကျေးဇူးတင်ရင်း ခင်မင်မိပါတယ် လို့လေ။
(ရေးချင်သလို၊ လျှောက်ရေး လိုက်မိတာလေး၊ ကိုသားကြီးတစ်ယောက် ကျေနပ်မိပါစေလို့ )
လူ့လောကကြီးထဲမှာ တစ်နေ့ တစ်နေ့လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြရတယ်။
လူတွေလူတွေ မနက်အလုပ်သွား၊ ညနေ ပြန်လာ ဒီလိုနဲ့ ပဲ
တစ်နေ့ တာအချိန်တွေ ပြီးသွားတော့လဲ ပြီးသွားတာပါပဲ။
တစ်ရက်တစ်ရက် စားဖို့ သောက်ဖို့ဈေးသွား ဝယ်ခြမ်းပြီး၊ ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်၊
စားကြ သောက်ကြ၊ ပြီးသွားတော့လည်း ပြီးသွားတာပါပဲ။
လှဖို့ ပဖို့တစ်နေ့ တစ်နေ့ပြင်ရဆင်ရ ဖြီးရ လိမ်းရ၊
ညနေမိုးချုပ် မိတ်ကပ်ပြန်ဖျက် မျက်နှာပြန်သစ်ရနဲ့ အင်းးးးးး ပြီးသွားတော့လည်း ပြီးသွားတာပါပဲ။
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ကြဆုံကြ၊ ခင်ကြမင်ကြ၊ ပျော်ကြပါးကြ၊
ပြန်ခွဲခွာကြရနဲ့ သံသရာ စက်ဝိုင်းထဲ လည်ပတ်ရင်း ပြီးသွားတော့လဲ ပြီးသွားတာပါပဲ။
ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး စတွေ့ ချစ်ကြိုက်၊ ခွဲကြ ကွဲကြ၊ အသည်းကွဲကြ
အချိန်တန်တော့လည်း ပြီးသွားတော့လဲ ပြီးသွားတာပါပဲ။
ရွက်ဟောင်းတွေကြွေ ရွက်သစ်လေးတွေဝေလို့ 
အသက်လေးတွေ တဖြည်းဖြည်းကြီးရင့်လာတယ်၊ ဘာကိုမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။
ပြီးသွားတော့လည်း ပြီးသွားမှာပါပဲလား? ......
ဒါ လောကဓမ္မတာတဲ့လား? ........
ဟင့်အင်း...... လွယ်လွယ်နဲ့ ဘာမှ ပြီးမသွားစေချင်ဘူး။
မျှော်လင့်ချက်လက်ကျန်လေးတွေ ပိုက်ထွေးလို့ 
ဘဝ.... ဘဝ.... လေးတွေ အတွက်
ဆက်လက် ကြိုးစား ရုန်းကန်ချင်သေးတယ်။
ဘဝတစ်ခု ပြီးဆုံးမသွားခင် တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်ခဲ့ချင်သေးတယ်။ လုပ်ခဲ့ချင်သေးတယ်။
ဘဝဆိုတာကြီးကို ရေစုန်မမျှော လိုက်ချင်ဘူး။ မျှောမပစ်လိုက်နိုင်ဘူး။
ငါ..... ဘာလုပ်ရမလဲ... ဘာလုပ်သင့်လဲ?
ငါဘယ်လို ရှေ့ဆက်ကြိုးစား သွားရမလဲ?
12.7.09 ( Sun; )
လက်ဆောင်ဆိုတာ လူတိုင်းလက်ခံရှိခဲ့ဖူးကြ သလိုပဲ၊ ပြန်လည်ပေးခဲ့ကြဖူးပါတယ်။
မွေးနေ့ လက်ဆောင်၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်၊ ............လက်ဆောင်....စသဖြင့်ပေါ့ အမျိုးမျိုးပေးခဲ့၊ ရခဲ့ ကြတယ်နော်။
Angel Shaper...... ရင်ဘတ်ထဲကနေ ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ဆောင်တွေ၊ ရခဲ့ဖူးတွေ လက်ဆောင်တွေကို ပြန်ပြီး ထုတ်ပြောမနေချင်ပါဘူး။ ကြွားရာရောက်နေမှာစိုးလို့ ။ ဟီးး ဟီးးးးးးးး
ခုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက် ပေးချင်တဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကို ပြောပြချင်တယ်။
ပထမဆုံး....ကျေးဇူးရှင် ဖေဖေ့ကို ရိုသေခြင်းဆိုတဲ့ လက်ဆောင်လေးပေးချင်တယ်။
မေမေ့ကိုတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ စာရိတ္တလေးပေါ့။
မိဘကိုရိုသေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်မိတတ်ပေမယ့် တခါတခါ မရိုမသေလေး
ပြောမိ၊ဆိုမိ၊ ပြုမူမိနေတတ်သေးလို့ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို ပုံသက်သေကောင်းတွေ ပြခဲ့ကြပါလျက်နဲ့ 
ကြမ်းတမ်းတဲ့ အပြုအမူလေးတွေကို လုပ်ပြမိတတ်တယ်လေ။
ကိုယ့်ရဲ့ မသိတတ်မှုလေးတွေက သူတို့ အပေါ် သောကတွေဘယ်လောက်များ ပေးမိနေပြီလဲ ဆိုတာ မစဉ်းစားရဲပါဘူး။ ဒါကြောင့် သားသမီးရတာနာ ထက် သားသမီးရတနာလေး ပိုဖြစ်ချင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ အပေါင်းအသင်းတွေအပေါ်မှာတော့ နားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ လက်ဆောင်လေးပေးလိုက်မယ်။ Angel Shaper က ကိုယ်ပဲ ပြောပြချင်ပြီး လူတဖက်သားကို နားထောင်ပေးရမှာ တခါတခါ အတ္တကြီးစွာ မေ့လျော့တတ်လို့ ပါ။
မိတ်ဆွေတွေရဲ့ စကားကို နားထောင်ပေးမှ အသိပညာတိုးမယ်၊ နောက်ပိုင်းလိုအပ်ရင် သူတို့ ကိုတောင် ပြန်ကူညီလို့ ရတာပေါ့။
ကိုယ့်ကို ရန်သူလို့သဘောထားသူတွေကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ လက်ဆောင်လေး ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ဒါမှ ကိုယ့်ရဲ့ ရန်သူက ကိုယ့်ရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာ ကိုနားလည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံးသော
မိတ်ဆွေတောင် ပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲ။ မနာလို မုန်းတီးမှုတွေလည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့။
ကိုယ့်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်အပေါ်မှာတော့ သည်းခံပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒါမှ သူ့ ဆီက အကြံဥာဏ်တွေတောင် ပြန်ယူလို့ ရမယ်လေ။
ကိုယ်တောင် ပိုတိုးတက် ဦးမယ်နော်။
လူသားတွေအားလုံးအပေါ်မှာ Angel Shaper ပေးမဲ့ လက်ဆောင်ကတော့
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ မေတ္တာဆိုတာ သူတပါးအတွက် အာဟာရ ဖြစ်သလို
ကိုယ့်တွက်လဲ အာဟာရ ဖြစ်လို့ ပါ။
မောင်တွေ၊ ညီမတွေ၊ အငယ်လေးတွေအပေါ်မှာတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံသက်သေလေးတွေ ပေးချင်ပါတယ်။
ဒါမှ ဘာမှနားမလည် မသိတတ်သေးတဲ့ အဖြူထည်လေးတွေ
ကမ္ဘာကြီးကို ငြိမ်းချမ်းလှပအောင် စွမ်းဆောင်တဲ့ အချိန်မှာ အသုံးလေးတော့ ဝင်မှာပေါ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ လေးစားခြင်းဆိုတဲ့ လက်ဆောင်လေးကို ဂုဏ်ယူစွာ ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ မလေးစားရင် ဘယ်သူမှ လေးစားမှာ မဟုတ်လို့ ပေါ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားဖို့ ၊ လေးစားနိုင်ဖို့ ကတော့ အတော်လေးကို ခက်ခဲတဲ့ အရာလေးပါ။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင် ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ ၊ ပုံသွင်းဖို့ ၊ ဆုံးမဖို့ ၊ ပြုပြင်ဖို့ ကို လူတွေက မိုက်မဲစွာ လျစ်လျူရှုထားတတ်မိကြတာကိုး............... ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်တယ်လေ။
ဒီလက်ဆောင်လေးတွေကို Angel Shaper ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့မပြောလိုပါဘူး။
ဒီအချိန်ကစပြီး ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ရင်း၊ ပြန် သတိပေးလိုက်တာပါ။
ကိုယ်စိုက်တဲ့အတိုင်း ကိုယ်ပြန်ရိတ်ကြတာပဲမို့ လား။
9.7.09 ( Thur; )
ဤကမ္ဘာကြီးသည် ပန်းတို့ နှင့် လွှမ်းခြုံထားသော
ကမ္ဘာလုံး တစ်ခုနှင့် တူနေပေမည်။
မေတ္တာဟူသော ဝေါဟာရကို ကြွေးကြော်တိုင်းသာ ပီပြင်လာမည် ဆိုလျှင်
ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည် မေတ္တာတို့ နှင့် လွှမ်းခြုံထားသော
ပျော်ရွှင်စရာ လှပသောနေရာလေး တစ်ခုနှင့် တူနေပေလိမ့်မည်။
ပွင့်သောပန်းတို့နွမ်းကြွေ ခြောက်သွေ့ကာ
ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရ သကဲ့သို့ 
ကြွေးကြော်သော မေတ္တာတို့ သည်လည်း လေထဲလွင့်ပါ ပျောက်လွင့်ရ စမြဲပင်။
အခြားအပင်မှ ပန်းပွင့်ကလေးများဖြင့် အစားထိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်သာ
ဤကမ္ဘာကြီးတွင် ပန်းတို့ သည် တည်မြဲနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်မှု မရှိပဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် မေတ္တာတို့ နေရာတွင်
အခြားသော အပင်သစ်ကလေးများကို စိုက်ပျိုးပေးကြပါက
ဤလူ့ ကမ္ဘာတွင် မေတ္တာသည် ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမည်သာ............
သမီးရဲ့ မြန်မာစာဆရာ ဆရာလင်းချင်း သင်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာတွေ စာတွေထဲက
မှတ်သားထားတာလေးကို ပြန်ပြီး ပုံဖော်လိုက်မိတာပါ။ ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4.7.09 ( Sat; )
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို မင်းတတ်နိုင်သမျှ မာယာတွေနဲ့ 
အဲဒီမိန်းကလေးဟာ မင်းရဲ့ မာယာတွေ ထဲမှာ အလဲလဲ အပြိုပြို ငြိတွယ် ဆင်းသက်ခဲ့ပြီးကာမှ
မင်းက ဘာမှမလုပ်လိုက်မိသလို၊ အေးတိအေးစက်နဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတော့
အဲဒီ မိန်းကလေးမှာ မင်းကို နားမလည်နိုင်တော့ ပဲ...........
မင်း ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ မြှားချက်တွေ တပွေ့ တပိုက်ကြီးနဲ့ 
တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ သူ့ ရဲ့ အနာဂတ်လေးတွေ မှေးမှိန်သွားကုန်တော့တာပေါ့။
မင်းနောက် အဲလို မလုပ်မိပါစေနဲ့ တော့ကွာ။
2.7.09 ( Thur; )
နင့်ကို ငါ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ပြောခဲ့ပါရဲ့နဲ့ 
ဒါမှမဟုတ်....... ဂရုကိုမစိုက်ခဲ့တာလား... ဟင် ............
ငါ့ရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်ပါဟာ။
နင် သူနဲ့ စချတ်တဲ့ အချိန် ငါ မှတ်မိပါသေးတယ်။
ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ကြ၊ ဓာတ်ပုံတွေ ပို့ ၊
သူပို့ တဲ့ ဓာတ်ပုံ ကသူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်လို့ လေ။
နင်....ညည မအိပ်ပဲသူနဲ့ ချတ်ပြီး၊
နောက်တော့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွား ကြတယ်ဟုတ်။
နင့်မှာ သူနဲ့ ချစ်သူတွေလဲဖြစ်ရော သူငယ်ချင်းတွေကို ပစ်ထား၊
ကွန်ပျူတာနဲ့ ပဲ တချိန်လုံး အချိန်ကုန်ပြီး
မနက်မိုးလင်းလို့နင့်ကိုလာကြည့်ရင် နားမှာ နားကြပ်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ ။
ငါ့မှာဆို စိတ်တောင်မကောင်းဘူး၊ နားရင်းထတီး ချင်စိတ်လဲ ဖြစ်မိတယ်။ ဟင်းးးး
အင်း ခုဆို........ ငါကြိုက်တဲ့ နင့်လက်ရာ.... ပဲကုလားဟင်းသီးစုံ ချဉ်ရည်နဲ့ 
ကြက်သားဟင်း လေးကို တောင် နင် ချက်မကျွေးတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ ဟွန်းးးးးးးး
နင့်လက်ရာ စားရဖို့ နေနေသာသာ၊ အစားတောင် နင်မှန်မှန် မစားနိုင်တော့ဘူးမို့ လား။
ငါနင့်ကို ပြောလိုက်ရင် ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြန်မပြော၊ နားမထောင် လုပ်ခဲ့တာ
ခုလို နင်ခံစားရဖို့ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ..... အဲဒီအချိန်ကတည်းက နင်သိခဲ့ရင်
ငါ နင့်ကိုပြောခဲ့တာ မှတ်မိသေးလား........
အဲဒီလို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ......
ကွန်ပျူတာရဲ့ ကီးဘုတ်ပေါ်က ထွက်ကျလာတဲ့ စကားလုံးတွေပါလို့ ။
ငါ နင့်ကို အထင်သေးဖို့ မပြောခဲ့သလို၊
အထင်ကြီး ပြီး ဇွတ်မှိတ်ယုံလိုက်ဖို့ လဲ အကြံမပေးခဲ့ဘူး မို့ လား။
ငါ နင့်ထက်ပို ပြီး ရင်နာတယ်၊ ခံပြင်းတယ်ဆိုတာ နင်ယုံကြည်ပေးပါဟာ။
ငါဆိုတဲ့ လူဟာလဲ နင်တို့ လို သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ်မှာ အဲလောက်သံယောဇဉ် တွယ်တာတတ်တာနင်အသိဆုံးပါ။
နင့်ထက် ငယ်ပေမယ့်၊ နင့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေနဲ့ ပဲ
ပေါင်းသင်းလာခဲ့တဲ့ ငါလို ကလေးဆိုးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားကို နင် အရေးမထားခဲ့တာ
ခုတော့ သူနင့်ကို BLOCK လုပ်လိုက်ပြီ။
နင်လဲ ကြေကွဲ ခံစားနေရပြီ။
င့ါမှာ နင့်အတွက် ရင်ဘတ်ထဲက ခံပြင်းစိတ်လေးတွေ၊ သူ့ ကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်လေးတွေ မျိုသိပ်ပြီး
လိုက်စုံစမ်းပေးခဲ့ရတာ သူက ကလေးအဖေ ဖြစ်နေတယ်လေဟာ..................
ကဲ..... ငါတို့ တွေ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ......
မလိုအပ်တဲ့ အပေါစားခံစားချက်လေးတွေကို ဘေးချိတ်ထားလိုက်စမ်းပါဟာ.....
နင့်ကို မှမရရင် ငါသေမှာပဲ ဆိုပြီး၊ တကယ်လဲ ကွဲရော...
နှာစေးချောင်းဆိုးလေးတောင် မဖြစ်ကြပါဘူး ဟ .... ဟဟားးးးးးးးးးး
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနာဂတ်သစ် အတွက် နေ့ သစ်တွေကို စိတ်သစ်ကိုယ်သစ်နဲ့ 
ကြိုးစား လျှောက်လှမ်းကြပါစို့ ဟာ... နော်။။။။။
ဟီးးးးးး ကြိုပြီး ဖြေရှင်းမထားရင် ငှက်ကလေးနဲ့ ကိုသားကြီးက အသေတွယ်တာ။
အမှန်အတိုင်းလုပ်ပါဟာ အချင်းချင်းပဲ ဆိုတာမျိုး၊
မမရေ ကိုယ်တွေ့ လားဆိုတာမျိုး တွေ လာဦးမယ်လေ....ဟဟဟားးးးးးးး
ဒါကြောင့် ကြားဖူးနေကျတွေထဲက အရာလေးတွေကို စေတနာစိတ်လေးနဲ့လျှောက်ရေးကြည့်တာပါလို့ ။